» कोरोना सङ्क्रमणबाट २३ जना नेपालीको विदेशमा मृत्यु
कोरोना सङ्क्रमणबाट २३ जना नेपालीको विदेशमा मृत्यु
२० बैशाख २०७८, सोमबार १६:१६
गत साता भारतमा २० सहित विदेशस्थित २३ जना नेपालीको निधन भएका छन् । गैर आवासीय नेपाली संघका अनुसार भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा बढ्दै गएको कोरोना भाइरस ( कोभिड–१९) को महामारीको प्रकोपका कारण मृत्युदर बढेको हो । संघको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा सञ्जीव सापकोटाका अनुसार गत साता भारतमा २०, कुवेतमा दुई र कतारमा एक नेपालीको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा कार्यरत स्वास्थ्य समितिका सदस्य तथा अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्समा कार्यरत डा. सागर पौडेलका अनुसार नयाँ दिल्लीमा १० र भारतका अन्य क्षेत्रमा थप १० गरी कूल २० जना नेपालीको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा अधिकांश ५० वर्षभन्दा मुनिका छन् । यससँगै हालसम्म विश्वका २१ मुलुकमा कोरोना संक्रमणका कारण ३ सय ७२ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ ।
हालसम्म मृत्यु भएकामध्ये २ सय ४५ जना मध्यपूर्वका छन् । अहिलेसम्म विश्वका ५४ मुलुकमा कोभिड–१९ महामारीका कारण संक्रमित हुने नेपाली ६८ हजार ५ सय ६ जना पुगेका छन् । कुल कोरोना संक्रमितमध्ये ९४ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ६४ हजार ७ सय ४४ कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
गत साता भारत, कुवेत, कतार, युएई, रोमानिया, रुस, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक र पोल्याण्डमा रहेका नेपालीमा थप कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको कोभिड–१९ उच्चस्तरीय समिति गैरआवासीय नेपाली संघका प्रेस संयोजक चिरन शर्माले जानकारी दिए ।
यसैबीच नेपालमा हालसम्म दुई लाख ९७ हजार ८७ संक्रमित पुगेकामा ९३ दशमलव ३ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ७७ हजार १ सय २३ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण शनिबार सांँझसम्म तीन हजार १ सय ३६ जनाको मृत्यु भएको हो ।
यसैबीच गत सोमबार वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. सापकोटाले महामारीका दौरान २ सउ ५० चिकित्सक र नर्स परिचालन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल बाहिर करीब पाँच हजार चिकित्सक र पन्ध्र हजार नर्स नेपाली छन् । ती सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई एनआरएनमा जोड्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।